Galaxy S10 တွင် Wireless PowerShare အသုံးပြုနည်း | Samsung Support Myanmar
ပင်မစာမျက်နှာ / ကုန်ပစ္စည်း အကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးရေး / How to free up space on Samsung mobile phone when it is full?
Galaxy S10 တွင် Wireless PowerShare အသုံးပြုနည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်သည့်နေ့ : 02.03.2019
S10 တွင် အားသွင်းချာဂျာ မလိုဘဲနှင့် ကိရိယာ-နှင့်-ကိရိယာ အားသွင်းနည်းကို ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ သင်၏ S10 နှင့် အခြားကိရိယာတို့ကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
S10 တွင် အတော်လေးပိုကြီးမားသည့် ဘက်ထရီကို အထူးစီစဉ်ပေးထားပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်း ပိုကြာစေကာ အက်ပ်ကိုလည်း ပို၍မြန်စွာ စတင်ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။
အပြီးတပ်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်းဉာဏ်ရည်သည် သင့်အမူအရာကို လေ့လာသင်ယူသောကြောင့်၊ ပါဝါကို ပို၍ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် ပါဝါ-ချွေတာရေးအနေအထားများသို့ အလိုအလျောက် အလိုက်သင့်ချိန်ညှိပေးနိုင်ပြီး အသုံးနည်းသော အက်ပ်များကိုလည်း ကန့်သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဘက်ထရီအတွက် Bixby Routines သုံး၍ အကောင်းဆုံးစီမံနည်းကို ရှာဖွေပါ
သင့်ကိရိယာရှိ ဘက်ထရီ အားနည်းလာလျှင်၊ သင်၏ S10 ထံမှ ပါဝါကို အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းယူပါ။
သင့်အသိပေးချက်ပန်နယ်တွင် “Wireless PowerShare” ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ သက်ဝင်ခလုတ်ဖွင့်ပြီး၊ အခြားကိရိယာကို သင်၏ S10 ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ၎င်းတို့၏နောက်ကျောချင်း ဆိုင်ထားလျက် ထားပါ။
သတိပြုရန်: အားသွင်းကွိုင်၏ တည်နေရာသည် ကိရိယာမော်ဒယ်အရ ခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ကိရိယာများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်မိသည်အထိ အနေအထားချိန်ညှိရန် လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ပါဝါအလုံအလောက် လွှဲပြောင်းထားပြီးသည့်အခါ ကိရိယာများကို ခွဲထုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာ အားအပြည့်သွင်းသည်အထိ စောင့်ပါ။
သတိပြုရန်- ဤအရာကို S10 ဖုန်းနှင့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းအင်္ဂါရပ်အား ပံ့ပိုးပေးသည့် အခြားကိရိယာများတွင်သာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ S10 ရှိ ဘက်ထရီအားအဆင့်သည် အဆင့်တစ်ခုအောက်သို့ လျှော့ကျလျှင်၊ Wireless PowerShare က အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
S10 ကို ကြိုးသုံးအားသွင်းနည်း အသုံးပြု၍ ပလတ်ခေါင်းထိုးထားစဉ်တွင်၊ အခြားကိရိယာကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခုတွဲ အားသွင်းနည်းကို သက်ဝင်ခလုတ်ဖွင့်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ-
1 S10 ရှိ အသိပေးချက်ပန်နယ်ကို အောက်ဆွဲချပြီး ၎င်းကို ခလုတ်ဖွင့်ရန် Wireless PowerShare အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
2 S10 ၏ အလယ်ဗဟိုကို အခြားကိရိယာဖြင့် ကျောချင်းကပ်၍ ထားပါ။
3 ကိရိယာများက ချိတ်ဆက်မိသည်နှင့်ချက်ချင်း ဖန်သားပြင်က အတည်ပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ “အိုကေ” နှိပ်ပါ။
4 အသိပေးချက်ပန်နယ်ကို ထပ်မံ အောက်ဆွဲချလိုက်လျှင်၊ ချိတ်ဆက်နေသည့် ကိရိယာများ အားသွင်းနေကြသည်ဟုဆိုသည့် မက်ဆေ့ခ်ျကို ပြသမှာပါ။ အစိမ်းရောင်ရှိသော Wireless PowerShare အိုင်ကွန်လည်း ပြကွက်ဘားတွင် သို့မဟုတ် သင်၏ Always On Display ပန်နယ်တွင် ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုရန်- အသုံးပြုနေဆဲ တွဲဖက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် ဖုန်းကာဗာများအပေါ် မူတည်၍၊ Wireless PowerShare အင်္ဂါရပ်က ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Wireless PowerShare ကို အသုံးမပြုခင် တွဲဖက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဖုန်းကာဗာများကို ဖယ်ရှားရန် အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းနည်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကိရိယာများဖြင့်သာ ယခုအင်္ဂါရပ်ကို သုံး၍ အားသွင်းနိုင်တာပါ။ အားသွင်းမှုမြန်နှုန်း သို့မဟုတ် ထိရောက်မှုသည် ကိရိယာ၏ အခြေအနေ သို့မဟုတ် နီးနားပတ်ဝန်ကျင်အပေါ် မူတည်၍ ခြားနားနိုင်ပါတယ်။
သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာအား ရှာမတွေ့ဖြစ်နေပါသလား။ သင့်အားကူညီပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ
Live Chat ပြောဆိုခြင်း
မနက် ၈နာရီမှ ည ၁၁နာရီအထိ
(စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံး ပိတ်ရက်များအပါအ၀င် ပိတ်ရက်မရှိ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။)
နေ့စဉ် မနက် ၇နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံး ပိတ်ရက်များအပါအ၀င် ပိတ်ရက်မရှိခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။)
၀န်ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန် စေရန်နှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖုန်းပြောဆိုမှုများအားလုံးကို အသံသွင်းယူထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
* ပုံနှိပ်စက် (ပရင်တာ) နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ကျေးဇူးပြု၍လေ့လာပါ HP website .
လူကြီးမင်းနှင့် အနီးဆုံးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ တည်နေရာအားရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Samsung အရောင်းဆိုင်များတွင်ပင် လိုအပ်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
လျှင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအားလိုအပ်ပါက အောက်ရှိ ယခုပဲစကားပြောမည် အားနှိပ်ပါ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်ထံသို့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်စက်ပစ္စည်း၏ မော်ဒယ်နံပါတ်ကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
စက်ပစ္စည်း၏မော်ဒယ်နံပါတ်အားရှာဖွေရန် အကူအညီလိုအပ်နေပါသလား။ အောက်ပါမီနူးမှ
သင့်စက်ပစ္စည်းအားရှာဖွေပါ၊ သင့်နံပါတ်အား ကျွန်ုပ်တို့ပြသပေးပါမည်။